‘पुल टेस्टिङ’ मार्फत एक किटले १० जनासम्म कोरोना परीक्षण – Health Post Nepal
‘पुल टेस्टिङ’ मार्फत एक किटले १० जनासम्म कोरोना परीक्षण
२०७७ वैशाख २७ गते १५:४०
सरकारले किटको खपत कम गर्न र परीक्षणको दायारा बढाउनका लागिभन्दै ‘पुल टेस्टिङ’को अवधारणा ल्याएको छ।
क्वारेन्टाइनमा बसेका र कम जोखिम रहेकाहरूलाई पुल टेस्टिङ गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए। ‘पुल टेस्टिङ’को लागि मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोलीले गरेको अध्ययनमा रिर्पोट सकारात्मक आएपछि परीक्षण गर्न स्वीककृति दिएको हो।
कारोनाका लक्षण देखिएका, शंकास्पद तथा संक्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसमा भने पुल टेस्टिङ नगरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पुल टेस्टिङ मार्फत १ किटले १० जनासम्मको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्।
कसरी गरिन्छ ‘पुल टेस्टिङ’?
हाल कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर पिसिआरमार्फत परीक्षण हुँदै आएको छ। तर, पुल टेस्टिङमार्फत ५ जनादेखि १० जनासम्मको परीक्षण गर्न सकिने माइक्रोबालोजिस्ट प्रकाश घिमिरे बताउँछन्। ‘५ देखि १० स्वाव नमुनालाई एउटैमा पुल गर्दा रिजेएन्टको बचत हुन्छ’, उनले भने, ‘नेगेटिभ आयो भने सबै नुमना नेगेटिभ हुन्छ, पोजेटिभ आएमा छुट्टा छुट्टै परीक्षण गर्न पर्ने हुन्छ।’
किटको अभावको भइरहेको अवस्थामा यो विधि प्रभावकारी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। हालसम्म नेपालमा विभिन्न १८ स्थानबाट पिसिआरबाट परीक्षण हुँदै आएको छ।
नेपालमा शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हालसम्म १५ हजार ४ सय ९२ नमुना परीक्षण गरिएको छ। पुल टेस्टिङबाट परीक्षण गर्दा नमुनाको दायारा बढाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
Tags: पुल टेस्टङ